Mihalalina ny Krizy Politika, Hanatontosa Fifidianana Iray Indray i Thailand Amin’ny Jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2014 13:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Swahili, Español, English
Famorian'olona manohitra ny governemanta maneho ny fanoavany ny Mpanjaka Bhumibol Adulyadej. Mitaky ny fialan'ny Praiminisitra ny mpanao fihetsiketsehana. Saripikan'i Sanji Dee, Copyright @Demotix (5/5/2014)
Tsy ela taorian'ny hetsi-panoherana ny fifidianana, notarihan'ny Komitim-Panitsiana Demokratikam-Bahoaka (PDRC), izay nihiaka ny fandreseny tamin'ny fanafoanana ny fifidianana notontosaina tamin'ny volana febroary tao Thailand, dia nisy daty vaovao napetraka hanaovana ny fifidianana faharoa amin'ity taona ity amin'ny 20 jolay ho avy izao. Nisento tokana ny praiminisitra Yingluck Shinawatra izay tratran'ny fahasarotana fa mba mety ho tafajanona elaela kokoa eo amin'ny fitondrana, na dia eo aza ny vesatra fiampangana kolikoly roa mihatra aminy.
Ny fitsarana no manapaka ny 7 Mey 2014, ary mety ho voaisotra eo amin'ny fitondrana i Yingluck raha hita fa meloka [naotin'ny mpandika amin'ny teny malagasy: voaisotra tokoa ravehivavy tamin'io fotoana io, araka ny hita amin'ny vaovao].
Mavitrika ve ny Thailandey handeha handrotsa-bato fanindroany indray ao anatin'ny enimbolana?
Fitsapa-kevitra maro mifandimby no nahitana fa “manahy” sy “sahiran-kevitra” momba ny fifidianana vaovao hotontosaina ny Thailandey mpifidy. Maro no mihevitra fa tsy hahavaha ny olana politika naharitra ampolony taona izay efa nananan'i Thailand praiminisitra 6, governemanta 5, fifidianana 3 ary fanonganam-panjakana 1. Ankoatra izany, handaniana 3,8 miliara baht ($127 tapitrisa) ny fifidianana vaovao izay hozakain'ny mpandoa hetra ihany – nefa ny sasany amin'ireo dia mpanohana ny PDRC izay mety hanao fahirano tsy handray anjara amin'izany fifidianana izany. Mbola ho fanariam-bola, fotoana, hery sy hahazoana aretin'andoha ho an'ny rehetra ihany izany raha mbola hofoanana ny fifidianana.
Tsy nety nandray anjara tamin'ny fifidianana ny mpanohitra tamin'ny febroary satria nolazain-dry zareo fa tsy hadio io fifidianana io raha mbola avela mirotsaka ao ny fianakavian'ny praiminisitra. Natao moa ilay fifidianana ho setrin'ny hetsi-panoherana goavana nataon'ny mpanohitra nihoatra ny telovolana.
Ahitana taratra izany fihetseham-po matroka eo amin'ny samy mpifidy izany ny resadresaka teo amin'ny serasera Thailandey:
Chaichol MCFC nanoratra tao amin'ny fafana an'aterineto ao amin'ny Pantip:
Tsy mino aho hoe hisy ny fifidianana. Tsy noho ny governemanta, fa noho ry Taug [Suthep] sy ny mpiara-miombon'antoka aminy. Nilaza izy nandritra ny enimbolana izay fa hohavaoziny ny firenena, nefa tsy nahavita na inona na inona izy afa-tsy ny mangata-bola eny an'arabe sy ny manakorontana.
Mieritreritra i Comment 1204962 fa mbola mila fanonganam-panjakana iray izy ity:
Efa nahavita nandrava antenimiera isika ary naverina tamin'ny vahoaka ny fahefana. Inona indray no mbola mety ho vitantsika [hamahana ny krizy]. Asio fanongam-panjakana ara-miaramila iray indray, azafady.
Nandeha lavidavitra kokoa ny mpanohana ny PDRC raha nangataka tamin'ny vahoaka handrava ny fifidianana.
Ao amin'ny pejy facebook-n'i Suthep – mpitarika ny PDRC, an'arivony ny fanehoan-kevitra tao izay (saiky) manohana ny hetsika “tsy misy fanitsiana alohan'ny fifidianana”. Nanoratra i Max Chakrit:
Majority rule doesn't work in Thailand because the voices of the majority come from those with little education (but in other countries, majority rule is fine). This is why Thai people are easily manipulated….
Tsy mety eto Thailandy ny lalànan'ny maro an'isa satria avy amin'ireo zara raha nahazo fanabeazana ny maro an'isa (fa raha any an-kafa dia mety tsara ny lalànan'ny maro an'isa). Izany no mahatonga ny vahoaka Thaïlandey mora ahodikodin-doha
Maneho hevitra ihany koa i Porn Pramualsap:
Whoever runs the country, it doesn't matter, as long as they don't cheat on the farmers.
Tsy maninona izay mitondra ny firenena, rehefa tsy manambaka ny tantsaha
Iankinan-java-dehibe tokoa ireo herinandro vitsivitsy manaraka ireo raja hizotra araka ny nanomanana azy ny fifidianana. Roa ny vato misakana ka anatin'izany ny hoe ho tafavoaka amin'ny vesatra fiampangana mihatra aminy ve i Yingluck; ary ny iray hafa dia hoe ho vita milamina ve ny fandrotsahana ho kandidà amin'ny 25 Mey. Ny fahombiazan'ny fanitarana ny fandrotsahana ho kandidà no ahitana taratra ny fahatontosan'ny fifidianana.